Arrimaha Login Spotify
Spotify waa boosteejo ah oo cajiib ah music hoorto in uu arkay qaar ka mid ah guul weyn iyo horumar sanadihii la soo dhaafay. Laga soo bilaabo isagoo codsiga yar oo dhawr boqol oo isticmaala in 2010 in ka badan 75 milyan oo isticmaale firfircoon ee 2015. Shabakadda ayaa degtay sidii tartan xoog leh oo ka jira adeegyada geeyo iyo codsiga. Laakiin wax kasta oo uu noqon karaa mid kaamil ah. Marka ay timaado qaab, Spotify ayaa u dhiibay adeegyada ay ugu fiican oo ay database abid soo taraysa iyo horumarinta oo ay la socdaan oo ay network ballaariyo, arrimaha farsamo ee qaar ka mid ah ayaa lagu soo food saaray dadka isticmaala ku. Qaar ka mid ah arimahan ka mid ah dhibaatooyinka login ah. Qoraalka soo socda waxaan iftiimin doonaa qaar ka mid ah dhibaatooyin soo noqnoqda oo ka wada hadli xal si loo hagaajiyo aad waayo-aragnimo ku saabsan Spotify oo si aad ku raaxaysan karaan music ee ay ugu fiican.
Lumay oo dhan profiles
Waxaa jira kiisas halkaas oo dadka isticmaala ku soo biiray Spotify ka hor 22 September 2011, ayaa laga badiyay faahfaahin ay oo dhan, playlists iyo adeegyada kale. Sidoo kale waxaa jiray users oo ku biiray shabakadda isticmaalaya xisaab Facebook in ka dib markii la isticmaalayo isla username iyo xisaabta . Laakiin, tani abuuray qaar ka mid ah arrimaha dadka isticmaala kuwan. Kuwa xubin ay la soo gudboonaatay dhibaato iyo si xal loogu dhibaatadan waa in ay xiri labadan xisaabaadka. Si tan loo sameeyo:
1. Logout account ka yimid nidaamka ka dibna login isticmaalaya magacaaga iyo isgarad.
2. Tag doorbidida  markaas network bulshada (edit menu Midigta) Tani xiri lahaa xisaabaadka iyo hagaajin madmadowga.
Haddii aad adiga oo isticmaaleya isticmaale account Facebook adeegyada markaas waa yar tahay in ay la kulmaan dhibaato la halmaamay password, sababtoo ah waxa ay si toos ah adeegyada Facebook ku xiri doono xisaabtaada iyo in aad dib karaan sirta aad. Ee ah kuwa u isticmaalaan xisaab email u yeelan doonaan in ay raacaan talaabooyinka qaar ka mid ah, u tag illoobin link password oo geli username. Hadda link dib waxaa loo diri doonaa xisaabtaada mail diiwaangashan, u helaan in ka dibna iyada oo loo marayo in lagugu hagi doonaa in link password dib ugu. Mararka laga yaabaa in aad xaqiijin faahfaahinta bixinta iyo sidoo loo xaqiijiyo.
Arrimaha kale Qaar ka mid ah:
1. Playlists ma hagaagsan qalabka (qalabka macruufka iyo Android)
Laga yaabo in dhibaato Tan waxaa loo wajahay ay sabab u tahay qaar ka mid ah unu la xidhiidha ama mararka qaarkood habka la daahiyo. Si loo xalliyo Logout ka xisaabtaada iyo hubi xiriir xogta. Saxiix-in si xisaabta iyo raaxayn playlists ah. Haddii tani aysan wax ku tarin dib codsiga.
2. adeegyada offline aan shaqaynayn (users macruufka iyo Android la xisaab premium)
Offline Adeeggu waa mid diyaar u ah dadka isticmaala xisaabta lacagta caymiska. Sidaas fadlan hubi in aad u qalanto inay ka adeegaan. Haddaba haddii adeegyada aan sii fiican u shaqeeyo, fadlan u hagaagsan tareenka si ay qalabka si isha. Sidoo kale qalabka ay u baahan tahay meel lagu keydiyo oo ku filan si loo badbaadiyo files xogta ee offline helaan. Meel ugu yaraan lagu talinayaa waa 1GB. Wixii shaqaynaya siman ay u ilaaliyaan shuruudaha.
3. Dhibaatooyinka macmiilka internetka
Macaamiisha internetka ay muhiim tahay kuwa raba in ay helaan adeegyada Spotify on desktops iyo Mac. Laakiin tan iyo macaamiisha web waa software Xisbiga 3-in ay u ogolaatay in ay helaan database Spotify ay la kulantay dhibaatooyin iyo isdhaafin adeegga. Qaar ka mid ah arrimaha sida faylasha ma ay helin, playlists maqan, tayada music lagu qancin oo dheeraad ah. Isticmaalayaasha ayaa soo jeediyay in la isticmaalo macaamiisha web lagu taliyay iyo rasmiga ah ee adeegyada sharciga iyo wax soo saarka tayada premium. Macaamiisha web Qaar ka mid ah ayaa la joojiyo adeegyada, halka qaar ka mid ah ee aan awoodin in ay maareeyaan baahida.
Sidoo kale, dadka isticmaala waxaa la soo jeediyay in ay qori xiriir internet caafimaad geeyo tayo wanaagsan iyo adeeg ka wanaagsan. In qaar ka mid ah xal sheegay macaamiisha internetka ee jira waa kuwo gaboobey oo ma u badan yihiin in ay la jaan qaada software cusub (Spotify ama nidaamka qalliinka). Hubi in aad version waa la cusboonaysiiyaa oo socon in qalab aad u leedahay in la sii wado adeegga.
4. Dhibaatooyinka Spotify dibadda
Spotify waxay bixisaa adeegyada gobolka gaar ah. Taas macnaheedu waxa weeye dadka isticmaala mid gobolka laga yaabaa in aanay awoodin inay isticmaalaan adeegyada qaar ka mid ah gobolka kale. Spotify xidha cinwaanka gobolka gaar IP in aad xisaabta iyo sidaas haddii in kala duwan, waxa ay tilmaamaysaa aad dibada joogto oo sidaas oo isticmaala lacag la'aan ah u isticmaali karaan ugu badnaan 14 maalmood ah adeegyada Spotify iyo sidoo kale in la isticmaalka xadidan. Waxaad u baahan tahay in aad bedesho goobta ay hadda ku sugan goobta si ay u helaan Spotify ku saabsan xisaabtaada inta ay safrayaan. Sidoo kale, si ay u sii wadaan adeegga 14 maalmood ka dib markii user u baahan tahay inaad gasho si account ka gobolka hooyo. Haddii aad tahay user premium isticmaalaya Spotify dibadda waa sida riyo oo kale. Waxaad isticmaali kartaa Spotify dhex Galaydh qaar ka mid ah. Xalka ugu wanaagsan ee tani waxay noqon lahayd adeegyada VPN ah. Tani waxay abuuri lahaa aqoonsigaaga dalwaddii ee gobolka hooyo oo waxaad sii wadi kartaa in ay isticmaalaan Spotify sidii hore oo wuxuu ku raaxaysan aad music dibadda.
Kuwani waa dhibaato yar soo food saaray dadka isticmaala ku Spotify. Laakiin waxaa jiray horumar joogto ah si kuwaas oo lagu xalin karo. Waxaad mar walba xiri kara taageerada Spotify si aad u hesho dhibaatooyinkaaga resoleved sidoo.
> Resource > Spotify > Spotify Login Arrimaha